Xiriirada faraxsan waxay kaa caawinayaan maareynta cadaadiska | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Caafimaadka Stress
Wixii aragti dhakhso ah ee diiqada, fiiri tan video.
Diiqada ba'an waa calaamad digniineed oo dabiici ah oo jidhka naga caawisa in aan ka jawaabno khatarta muddada-gaaban ama isbeddelka cimilada. Waa nidaam badbaado muhiim ah. Maaddaama jawi nafsi ah, waxay kicineysaa tamarta nalooga filan ee ficilka, sida duullimaadka ama dagaalka. Waxaa la jebin karaa afar jawaabood: cabsi (arousal), duulimaad (iska ilaalinta waxyeelada la dareemayo ayaa badanaa ah jawaabta la door bido ee dagaalka); Dagaalka (wajiga dhibaatada) iyo barafka (ku ciyaarida daarashada iyo rajeynta rajada / cabsida guuritaanka). Marxaladani waxay u adeegsan karaan maalin kasta walbaha murugada.
Markaan caafimaad qabno, waxaan heysanaa tamar si aan ula macaamilno waqti gaaban ama walbahaar-ba'an, tusaale ahaan, socodka baska. Qiyaasta wadnaha ayaa kor u kacaya, heerarka sonkorta dhiigaagu wuu beddeli karaa, dhididkayagu wuu kordhayaa si aanu ugu caawino jiritaanka jidhka sida aan u ordo. Dareen-celintaas oo dhan waxay keenaan hormoonnada walbahaarka, adrenaline iyo cortisol. Marka ugu horeysa ee aan soo aragnay, waxaad tidhaahdaan, adoo arkaya baskeena inta aanan helin baska, waxaan soo saarnaa adrenaline iyo noradrenaline (ereyada Maraykanku waa epinephrine iyo norepinephrine) dhowr daqiiqo si ay noogu caawiso in aan abaabulno inaan wakhtigaas ku helno. Marka walbahaarka uu dhamaado (marka aynu samaynay) jirkeena si deg deg ah ayuu u soo kabanayaa, dheelitirka ayaa dib loo soo celiyaa.
Haddii strateer uu sii socdo, tusaale ahaan, waxaanu maqnaan jirnaa baska oo halis ugu jirnaa inuu soo daahayo kulan muhiim ah ama taariikhda, ka dibna dabka cortisol ee neurokooliyada si kor loogu qaado heerarka tamarta si aad u dheer ku filan oo wax looga qabto culeyska joogtada ah. Cortisol wuxuu xoojiyaa tamarta kaydka lagu keydiyo beerka iyo murqaha si uu nagu caawiyo 'dagaal' ama 'carar'. Dhibaatadu waxay tahay in ay ku hayn karto nidaamka si fiican ka dib marka qalqalaha uu dhaafo.
Cortisol wuxuu sii wadaa inuu daadadkeeno nidaamkayaga haddii aan hayno wax badan oo culus oo nolosheena ah. Maanta walbahaariyeyaashu waxay noqonayaan nafsaani, welwel ku saabsan jagooyinka bulshada, khilaafaadka qoyska, guusha dhaqaale ama kelinimada, halkii ay ka dhalan lahaayeen hanjabaad xagga jirka ah sida qabiillada dagaalyahanka ah ama gabbaadyada dillaaca. Jidhkayagu wuxuu ka jawaabayaa khatarta nafsadeed ee la mid ah sida awoowayaashii hore ee awoowayaashu ay ku sameeyeen hanjabaad jireed.
Marka qofku u isticmaalo / hoos u dhigo heerarka qaar ka mid ah sawirada naxdinta leh ee goobaha porno, waxay u baahan yihiin arin badan, sawirro badan oo naxdin leh si ay u helaan sare. Walaaca waxay kordhisaa arooska jinsiga kaas oo ku lug leh dopamin dheeri ah. Heerarka sare ee cortisol ee nidaamka waa calaamadda bayoolojiga ee ma aha oo kaliya fekerka, laakiin sidoo kale niyad-jabka.
Cadaadisku wuxuu isku ururin karaa wacyigelinta miyir-qabka. Si lama filaan ah waxaan dareemeyn karnaa nolosheena oo waxaan dareemeyn karnaa in aan la qabsan karno. Ma lihin adkeysi isku dhac ama dhibaato. Maskax-maskaxeed ayaa ku tiirsan caado. Fikradda hal-abuurka ah waa mid aad u adag. Diiqad aad u badan, muddo dheer, waxay noqotaa cadaadiska daba dheeraaday. Tani waa marka jidhkeenu aanu awoodin inuu dib u soo ceshado maadaama uu ku dhaco walaac ba'an. Waa maxay waxa nala soo mari kara, habaynaya habka difaaca jirka, waxay naga dhigeysaa mid u nugul shilalka waxayna naga dhigeysaa inaan dareemo niyadjab, walaac iyo koontarool. Taas ayaa ah markaan aad ugu nugulahay qaadashada kiciyeyaasha kale, daroogooyinka ama aalkolada, iyo sidoo kale xayeysiis internet oo aad u daran oo naga dhigaya inaan dareemo fiicnaan oo aan ka fogaano xanuunka.
Isticmaalka joogtada ah ee sawir-gacmeedka internetka ayaa culeys weyn ku haya tamarta jirka ee keydsan waxayna u horseedaa dhammaan noocyada dhibaatooyinka jirka iyo maskaxda. Xakamaynta Neefsashada HPA ee Ragga ah ee leh Dhibaato Ba'an (2015) - Daraasad lala yeelanayo 67 ragga balwada leh iyo 39 xakameynta da'da ku habboon. Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) dhidibka ayaa ah udub-dhexaadka udub dhexaadka jawaab celinta walaaca. Balwadaha wuxuu bedelaa wareegyada maskaxda ee maskaxda taasoo keentay farsamada HPA ee aan shaqaynayn. Daraasaddan ku saabsan dadka galmada ku xeeldheer (hypersexuals) waxay heleen jawaabta isbedelka cadaadiska oo muraayad u helaya natiijooyinka mukhaadaraadka.
Sida aan u maareeyneyno walaaca sanadaha badani waxay fure u tahay samaqabka iyo xiriirkeena. Sidii aan aragnay Daraasada deeqda, qabatinka, niyad-jabka iyo neurosis waxay yihiin caqabadaha ugu weyn ee la xidhiidha caafimaad iyo farxad.
Cadaadiska ayaa diiradda saaraya diirada iyo tamarta jirka ee ka soo jeeda meelaha muhiimka ah sida maskaxda, nidaamka dheef-shiidka iyo xubnaha taranka si ay u quudiyaan tamarta meelaha ay u baahan yihiin tamar si degdeg ah nooga soo baxa khatarta la arko. Taasi waa sababta waqtiga, markaan maareynayno cadaadiska nagu habboon, iyo walbahaarku waa lama huraan, waxaanu horumarinnaa xaaladaha dheef-shiid kiimikaadka sida cilladda mindhicirka, ama xasuusto liidata iyo awood la'aanta in ay xoogga saaraan muddo dheer. Waxaan lumineynaa habka difaaca jirka, waxaan u qaadnaa infekshinka si sahlan oo waqti dheer qaadsiin karnaa. Dhibaatooyinka da'da jirka iyo jidhka.
Dhibaatada dabadheeraad ah, adrenaline wuxuu abuuraa nabaro ku jira xididdada dhiigga ee keeni kara wadno-qabad ama faalig, iyo cortisol waxyeello unugyada hippocampus, oo xakameynaya awooddeena inaan barto oo aan xasuusno.
Xaalad ahaan, nooca ugu xun ee walaaca waa dareen aan xakamaynaynin dhibaatada, inaanan heleynin gargaar.
Marka gaaban, walbahaarka ayaa inaga harraa.
<< Saamaynta Jirka Kicin Kacsi Leh >>